Indonesia kuendesa guta guru kuguta idzva muBorneo jungle
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Indonezhiya » Indonesia kuendesa guta guru kuguta idzva muBorneo jungle
Mufananidzo wakagadzirwa nekombuta wakaburitswa naNyoman Nuarta uchiratidza dhizaini yeramangwana muzinda wemutungamiri weIndonesia pamuzinda wayo mutsva kuEast Kalimantan.
Kuungana kweJakarta, kumusha kune vanhu vanopfuura mamirioni makumi matatu, kwagara kuchinetswa nezvinetso zvakasiyana-siyana zvezvivakwa uye kutsvikinyidzana. Kufashamira nguva zhinji uye kutya kwekuchinja kwemamiriro ekunze kwakatungamirawo dzimwe nyanzvi dzemamiriro ekunze kuti vayambire kuti guta hombe rinogona kunyura pasi pemvura panosvika 30.
Indonesia inoita kunge ichawana guta guru idzva munguva pfupi. Magweta emuIndonesia nhasi avhota kuti atsigire mutemo unobvumidza kutamiswa uko kunoona guta guru renyika richifamba makiromita zviuru zviviri kubva kuguta re. Jakarta pachitsuwa cheJava.
Danho iri rakatanga kuziviswa neMutungamiriri Joko Widodo kumashure muna Kubvumbi 2019.
Mutemo mutsva wapasiswa IndonezhiyaParamende inobvumidza kutamiswa kweguta guru renyika kubva Jakarta kuenda kuguta idzva richavakwa kubva pakutanga pane chimwe chezvitsuwa zvikuru zveIndonesia.
Inonzi 'Nusantara', iro guta idzva richavakwa panzvimbo yesango-yakavharika nzvimbo mudunhu reEast Kalimantan pachitsuwa cheBorneo, iyo Indonesia inogovana neMalaysia neBrunei.
Matambudziko akatarisana neguta guru remazuva ano akataurwa sechikonzero chekufamba kamwe kamwe. Jakarta's agglomeration, kumusha kune vanhu vanopfuura mamirioni makumi matatu, yagara ichinetswa nematambudziko akasiyana ezvivakwa uye kusangana. Kufashamira nguva zhinji uye kutya kwekuchinja kwemamiriro ekunze kwakatungamirawo dzimwe nyanzvi dzemamiriro ekunze kuti vayambire kuti guta hombe rinogona kunyura pasi pemvura panosvika 30.
zvino, Indonezhiya sezviri pachena yakatsunga kuvaka nzvimbo ine hushamwari 'utopia' panzvimbo yesango yemahekita 56,180 muBorneo. Huwandu hwemahekita 256,142 hwakachengeterwa chirongwa ichi, nenzvimbo zhinji dzakagadzirirwa kuwedzera guta mune ramangwana.
"Iri [guta guru] haringangove nemahofisi ehurumende chete, tinoda kuvaka guta idzva rakangwara rinogona kuita magineti etarenda repasi rose uye nzvimbo yekuvandudza," Widodo akadaro mukutaura kuyunivhesiti yeko neMuvhuro.
Mutungamiriri wenyika akatiwo vagari vemuguta idzva vachakwanisa "kuchovha bhasikoro nekufamba kwese kwese nekuti kune zero emissions."
Basa iri, zvisinei, rakatoshoropodzwa nevaratidziri vezvakatipoteredza, avo vanopokana kuti kuenderera mberi kwemaguta eBorneo kunoisa mungozi nzvimbo dzesango dzemunzvimbo dzine mvura dzakatokanganiswa nemigodhi neminda yemafuta emichindwe.
Mari yechirongwa ichi haisati yaburitswa zviri pamutemo asi mimwe mishumo yenhau yakamboti ingangosvika mabhiriyoni makumi matatu nematatu emadhora.
Borneo Indonezhiya Jakarta Marazhiya
Tourism Seychelles Kick-Inotanga Zviitiko Zvekusimudzira paFITUR Spain
Chombo chakakosha chekurwisa chirwere